Norway oo qaadaneysa 600 qaxooti oo laga soo raray dalka Libya oo la geeyey Rwanda… – Hagaag.com
Norway oo qaadaneysa 600 qaxooti oo laga soo raray dalka Libya oo la geeyey Rwanda…
Norway ayaa waxay sheegaysaa inay qaadan doonto 600 qaxooti oo dhowaan loo daadgureeyey dalka Rwanda iyagoo laga keenay xarumaha dadka lagu hayo ee dalka Libya, maadaama wadanka Scandinavianka uu doonayo inuu joojiyo tahriibka mararka qaarkood muhaajiriinta ugu dhinta Bada Mediterranean-ka.
Wasiirka cadaalada iyo arrimaha soo galootiga Joaran Kallmyr ayaa warsaxaafadeed uu soo saaray ku sheegay “waxaa muhim ii ah inaan dirno dhowaaq dhahaya inaan raalli ka aheyn wadooyinka tahriibka iyo kuwa taageera, laakin taas bedelkeeda waxaan soo qaadi doonaa dadka u baahan magangelyada nidaam hagaagsan”.
“Sidaa darteed, dowladdu waxay go’aansatay inay 600 oo qaxooti ah oo laga soo qaaday Liibiya tiro 800 oo ka mid ah guud ahaan oo lagu qaabilay xeryaha ku-meelgaarka ah ee Rwanda 2020,” ayuu raaciyay. Qaar badan oo ka mid ah magangalyo-doonku waxay ka soo jeedaan waddamada Geeska Afrika.
Maadaama qulqulka muhaajiriinta tirada badan ee ku soo qulqushay Yurub 2015, mas’uuliyiinta gaar ahaan Midowga Yurub, waxay isku dayayaan inay joojiyaan qaxootiga iyo muhaajiriinta ka soo talaabaya Badda Mediterranean-ka iyagoo isku dayaya inay gaaraan Yurub. Kumaanan qof ayaa ku dhintey Badda. Halka Kuwa badan oo kale ay ka dhoofeen xeebaha Liibiya.
Arrintan ayaa qeyb ka ah heshiis ay kala saxiixdeen Rwanda, Midowga Afrika iyo hay’adda qaxootiga ee Qaramada Midoobay bishii Sebtember, waddankan Bariga Afrika ku yaallo ayaa martigalinayaa xero loogu talagalay dadka laga soo daad gureeyay inta badan meelaha rabshadaha, iyo xarumaha dadka lagu hayo ee buux dhaafsan ee dalka Libya.
Ilaa 800 ayaa hada ku sugan xarun ku meel gaar ah ee degmada Bugesera ee Rwanda.
Illaa iyo hadda Norwey iyo Sweden ayaa waxay soo bandhigeen inay qaadan karaan qaar ka mid ah, sida uu sheegay wasiirka arrimaha dibadda ee Rwanda Vincent Biruta.